အင်္ဂလိပ်လိုဆံပင်ရွှေရောင်ဆံပင်? | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
Светлые волосы на английском — တရားမျှတသောဆံပင်.
У меня светлые волосы. — I have fair hair.
Мои волосы — светлые. — My hair is fair.
Blonde, как предлагают выше — это блондин, блондинка будет blondie.
အနက်ရောင်ဆံပင်အဖြူ, ဒါပေမယ့်မ, ကအစားအညိုရောင်ဖြစ်ပါတယ်။
Я — шатен. — Imabrown-haired person / man / woman (шатенка).
ငါ့ဆံပင်မျှတသည်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာအင်္ဂလိပ်ကျောင်းမှာသှနျသငျခဲ့သညျ။ ဒါသူတို့ပြောပေမယ့်ခဲ။ ထိတ်လန့်, တရားမျှတသောဆံပင်ကလေးကချွတ်ယူလိုက်ပါတယ်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းဒါပေမယ့်ယေဘုယျအားဖြင့်အလင်းအရောင်ဆံပင်ဖော်ပြထား:
из списка нам нужны последние слова — honey, sun-kissed и harvest gold. А проще всего сказать quot;dark blondequot;.
အင်ျဂလိ Quote မည်ဖြစ်ကြောင်းသကဲ့သို့၎င်း, ငါဆံပင်ရွှေရောင်ဆံပင် Quote ရှိ ?;
ငါဆံပင်ဆံပင်ရွှေရောင်ပါပြီ။ ရှာဖွေရေးအကွက်တွင် Yandex သို့မဟုတ် Google quote ထဲမှာစာရိုက်; angliyskiyquot သို့ရုရှားအနေဖြင့်ဘာသာပြန်ဆိုသူ;, ကိုမဆို link ကိုသွား source code ကို၏ပြတင်းပေါက်၌နှိပ်ခြင်းနှင့်အခြားအကွက်ထဲသို့တစ်ချက်ချင်းဘာသာပြန်ချက်ရခြင်းဖြစ်သည်။
22 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,361 စက္ကန့်ကျော် Generate ။